TaxJar Emmet ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အရောင်းအခွန် artificial Intelligence | Martech Zone
ယနေ့ခေတ်အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးအတွက် ပို၍ ခက်ခဲသောစိန်ခေါ်မှုများအနက်မှတစ်ခုမှာဒေသန္တရအစိုးရများအနေဖြင့်သူတို့၏ဒေသအတွက် ၀ င်ငွေပိုမိုရရှိစေရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရောင်းအားခွန်ကိုချမှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ယနေ့၏အဖြစ်, ကျော်ရှိပါတယ် ထုတ်ကုန်ခွန်အမျိုးအစား ၃၀၀၀ ရှိသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခွန်အကောက်တရားစီရင်မှု ၁၄၀၀၀.
အွန်လိုင်းမှဖက်ရှင်ရောင်းသောလူတစ် ဦး သည်သူတို့ထုတ်ကုန်ထဲသို့ထည့်လိုက်သောသားမွေးများသည်ယခုအခါသူတို့၏အဝတ်အစားကိုကွဲပြားစွာခွဲခြားထားပြီး Pennsylvania တွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်စေသည်ကိုသတိမပြုမိပါ။ ဒါကဥပမာတစ်ခုပဲ။ ဒီအဆုံးမဲ့အခွန်ဥပဒေတွေကသန်းပေါင်းများစွာကိုမတော်တဆမှားယွင်းရောင်းအားခွန်ကောက်ခံခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်၊ ​​အဲဒါကသင့်လုပ်ငန်းကိုအခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်တယ်။
သင်၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီကိုမှန်ကန်သောကုန်ပစ္စည်းအခွန်ကုဒ်နံပါတ်ဖြင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်နာရီများစွာကြာပြီးသင့်အရောင်းအခွန်ကိုကိုင်တွယ်သူအားစိတ်ပျက်စရာများစွာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပြီးတော့အဲဒါဟာတစ်ကြိမ်တည်းလုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းရောစပ်မှုတွင် SKU အသစ်များထည့်သည့်အခါ ၄ င်းတို့ကိုစနစ်တကျအမျိုးအစားခွဲထားရန်လိုအပ်သည်။
TaxJar သည်အချက်အလက်များကိုတူးဖော်ခဲ့ပြီး SKU ၏တစ်မိနစ်လျှင်ဤသုတေသနအားလုံးပျမ်းမျှအားယူဆလျှင် SKUs ၃၀၀၀ ခန့်ရောင်းချသောဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုယူလိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ခွဲခြားရန်နာရီ 50.
Emmet: အရောင်းအခွန် artificial Intelligence
TaxJar တီထွင်ခဲ့သည် Emmet, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး အတုအသိဉာဏ် ရောင်းအားအခွန်အမျိုးအစားစက်ရုပ်။ TaxJar အင်ဂျင်နီယာများမှတည်ဆောက်ထားသည့် Emmet သည် TaxJar ဖောက်သည်များ၏အချိန်ကိုအလိုအလျောက်သက်သာစေရန်စက်ပစ္စည်းသင်ယူခြင်းကိုအသုံးပြုသည် အခွန်ကုဒ်အားဖြင့်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ခွဲခြား.
၂၀၂၀ အစပိုင်းတွင် Emmet သည် TaxJar ဖောက်သည်များ၏ထုတ်ကုန်များကိုအတိအကျခွဲခြားသတ်မှတ်ရာတွင် ၉၀% အောင်မြင်မှုပြသခဲ့သည်။ Emmet နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန် ၃၀၀၀ ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည်နာရီအနည်းငယ်သာကြာသည်။ ၎င်းသည်စက်သင်ခြင်းဖြင့်စွမ်းအားရှိသောကြောင့် Emmet သည်အမျိုးအစားခွဲခြားထားသောထုတ်ကုန်အသစ်တိုင်းနှင့်ပိုမိုတိကျသည်။
Emmet သည်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုရိုးရှင်းစေပြီးတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစျေးကွက်ရှိတိကျမှန်ကန်ပြီးအဆင့်မြင့်အရောင်းအခွန်နည်းစနစ်များဖြင့်ထောက်ပံထားသည်။
အင်ဂျင်နီယာ TaxJar ဒါရိုက်တာ Alec Carper
လတ်တလောတွင် Emmet သည် TaxJar app အတွင်းရှိသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များကိုခွဲခြားသော TaxJar ဖောက်သည်များအားကူညီသည် လာမည့်လများ၌ Emmet TaxJar ၏ SmartCalcs အရောင်းအခွန် API ကိုအသုံးပြုသော (သို့မဟုတ်၊ Amazon, Shopify, BigCommerce စသည်ဖြင့်) eCommerce အရောင်းလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ရောင်းအားခွန်ကောက်ခံသော TaxJar ဖောက်သည်များနှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်မည်
TaxJar Demo တောင်းခံပါ
အခွန်ရုံး ရောင်းဝယ်မှုအခွန်စည်းကြပ်မှုကိုတာဝန်ယူရန်အီးကောမတ်စ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအားပေးသည်။ TaxJar လုံးဝ ရောင်းအားအခွန်တွက်ချက်မှုများ၊ နည်းပညာ၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အခွန်အကြံပေးသူများအတွက်အပြည့်စုံဆုံးမိတ်ဖက်အစီအစဉ်ကိုပေးသည်။ သူတို့ရဲ့ API အပြင် TaxJar က NetSuite, Magento, Shopify, Walmart, Amazon, BigCommerce, Ecwid, WooCommerce, Squarespace, Square, နှင့် Etsy တို့နှင့်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။